राजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/राजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस
दमौली । राजतन्त्र न’ढलेको भए पूर्व युवराज पारस यतिबेला आ’लिसन नारायणहिटी दरबारमा हुने थिए । तर ज’नआन्दोलन भाग २ को ब’लमा रा’जतन्त्र अ’न्त्य हुन पुग्यो । राजतन्त्र अन्त्य भएसगै पूर्वराज परिवार नारायणहिटी दरबार छा’डेर आफ्नै निजी निवास निर्मल निवास बस्दै आईरहेको छ । तर पूर्व युवराज पारस शाह भने पारिवारिक बे’मेल भएसगै लामो समय देखि बेग्लै बस्दै आईरहेका छन् । यसरी बेग्लै बस्ने क्रममा उनी लामो समय थाइल्याण्डमा बसे भने केही बर्ष अगाडि नेपाल फर्किएका छन् ।